Mitatitra ny fanavaozana COVID-19 i Anguilla: tranga vaovao 1 nohamarinina; enina ratsy ary iray miandry
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mitatitra ny fanavaozana COVID-19 i Anguilla: tranga vaovao 1 nohamarinina; enina ratsy ary iray miandry
Androany, faha-2 aprily tamin'ny 9:53 maraina dia nahazo fampandrenesana avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamam-bahoaka any Karaiba (CARPHA) izahay fa ny 1 amin'ireo santionany fito nalefa ny Alatsinainy 30 martsa dia voaporofo fa voan'ny virus COVID-19. Ireo santionany 6 hafa dia ratsy ho an'ny COVID-19.
Ny tranga tsara dia tranga nafarana avy any ivelany, lehilahy 78 taona monina amin'ny tantaram-pitetezana tany amin'ny faritany amerikana any ampitan-dranomasina tao anatin'ny fe-potoana nampidirana am-bavahady. Naneho soritr'aretina malemy izy ary mijanona mitoka-monina isaky ny protokolata efa napetraka. Ny fifandraisana akaiky rehetra dia napetraka ao ambanin'ny quarantine ary voamarina amin'ny fampandrosoana ny soritr'aretina.
Hatreto, Anguilla dia nanamafy tranga telo tamin'ny virus COVID-19. Ny minisiteran'ny fahasalamana dia miandry valiny 1 miandry avy amin'ny santionany nalefa tamin'ny alarobia 1 aprily. Ny Governemanta Anguilla dia niomana amin'ny fahatongavan'ny COVID-19 hatramin'ny faran'ny volana Janoary. Manentana ny mponina izahay mba tsy hikoropaka fa ho tarihin'ny fomba fanao manampy azonao atao hisorohana ny fihanaky ny COVID-19.
Ny mpikambana amin'ny besinimaro dia entanina indray mba hanaraka fidiovana, etikety taovam-pisefoana, ary hanaraka ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina mba hisorohana ny fihanaky ny COVID-19.
Hanohy hanome vaovao ara-potoana sy marina ny Minisitra raha mbola mivoatra hatrany ny raharaha. Ireo olona manana fanontaniana, ao anatin'izany ireo manana ahiahy mety ho tratry ny COVID-19, dia tokony hiantso ny laharam-pifandraisan'ny Minisitera amin'ny 476-7627, izany hoe SOAT 476 na 584-4263, izany dia 584-TANANA.
Ny Ministeran'ny Fahasalamana dia hanohy hanome fanavaozana ara-potoana amin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny haino aman-jery, ny pejy Facebook ofisialinay na amin'ny www.iternancf19.ai.
Raha hamaky vaovao bebe kokoa momba ny fitsidihan'i Anguilla Eto.
Belize dia manamafy ny tranga COVID-4 faha-19, manidy sisintany amin'ireo teratany